lundi, 16 juillet 2018 07:57
Kitra-Mondial 2018: Tompondaka ny Frantsay
Norombahan’i Frantsa fanindroany ny amboara erantan’ny amin’ny baolina kitra, roapolo taona taorian’ny nahazoany izany voalohany ny taona 1998. Tamin’ny isa 4 noho 2 no nandresen’i Frantsa an’i Croatie tamin’ny famaranana omaly tany Rosia. Mbola mpilalao frantsay no zandriolona indrindra nandray anjara tamin’iny andiany faha-21 tamin’ny Mondial iny ary nahatafiditra baolina efatra dia i Kylian Mbappé, izay manana ila kameroney. Niatrika ny lalao famaranana ny filoha frantsay Emmanuel Macron, ny filohan’i Croatie Rtoa Kolinda Grabar-Kitarović, ary ny filoha rosiana izay nampiantrano ny lalao, Vladimir Poutine. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 14 juillet 2018 10:30
Kitra-Mondial 2018: Hiady laharana faha-3 i Angletera sy Belzika
Hotanterahina anio sabotsy 14 jolay amin’ny 5ora hariva ao amin’ny kianjan’i Saint-Pétersbourg any Rosia ny famaranana kely amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra. Hifandona amin’izany ireo ekipa roa raraka teo amin’ny dingan’ny manasadalana dia i Angletera sy Belzika.
mercredi, 11 juillet 2018 09:21
Kitra-Mondial 2018: Tafita hiatrika famaranana i Frantsa, fanintelony tao anatin’ny 20 taona io
Ny fandresena an’isa 1 noho 0 nanoloana an’i Belgique teo amin’ny lalao manasadalana ny talata 10 jolay alina, no nitondra ny telosoratra frantsay amin’ny famaranana ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra. Tonga nanohana an'i Frantsa tamin'ity lalao halina ity ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Fanintelony amin’izao i Frantsa no hiatrika famaranana taorian’ny 1998 nivoahany nandresy nanoloana an’i Brésil sy 2006 niondrehany nanoloana an’i Italia. Miandry izay tafavoaka mpandresy eo amin’i Croatie sy Angleterre izy ireo amin’ny 15 jolay hanaovana ny famaranana ao Moscou. 280.000 euros na 1 miliara Ariary isan'olona no fankasitrana ireo mpilalao frantsay tonga amin'izao famaranana izao. (Jereo sary Tohiny)
dimanche, 08 juillet 2018 10:25
Kitra-Mondial 2018: Adin’ny samy Eôrôpeana 100% ny tohiny
France, Belgique, Angleterre ary Croatie, ireo no ekipa efatra tonga eo amin’ny manasadala amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra, tanterahina any Rosia ny 14 jona ka tramin’ny 15 jolay 2018. Frantsa nandresy 2 noho 0 an’i Uruguay. Belgique nandrava ny nofinofin’i Brésil, rehefa nirava 2 noho 1 ny roa tonta. Angleterre nanilika an’i Suède tamin’ny 2 noho 0. Taorian’ny “tirs au but” 4 noho 3 kosa i Croatie no namarana ny dian’i Russie mpampiantrano rehefa nirava sahala 2 noho 2 ny roa tonta tao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna. Adin’ny samy Eôrôpeana 100% ny tohiny. Tsy hivoaka ao Eorôpa izany ny amboara amin’ity andiany faha-21 ity, na naniry ny handrombaka izany aza i Brésil sy Argentine. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 05 juillet 2018 21:20
Kitra-Mondial 2018: Mbola i Harry Kane no mpampidi-baolina be indrindra
Mitarika vonjimaika amin’ny isan’ny baolina matiny hatreto ilay kapitenin’ny ekipam-pirenena anglisy Harry Kane ; enina (6) ny baolina tafidiny hatreto. Laharana faharoa, samy nampidi-baolina efatra (4) avy i Romelu Lukaku (Belgique) sy Cristiano Ronaldo (Portugal). Samy nampidi-baolina telo (3) avy hatreto i Yerry Mina (Colombie), Diego Costa (Espagne), Kylian Mbappé (France), Denis Cheryshev (Russie), Artyom Dzyuba (Russie) ary Edinson Cavani (Uruguay). (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 04 juillet 2018 13:20
Kitra-Mondial 2018: Tafita tamin’ny « tirs au but » i Angleterre
Ny fihaonan’i Angleterre sy Colombie no nanakatona ny lalao ampahavalon-dalana amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra, tanterahina any Russie ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018. Nirava sahala 1 noho 1 ny roa tonta tao anatin’ny 90 minitra, fe-potoana ara-dalàna. Tsy niova ny isa taorian’ny fanalavam-potoana. Taorian’ny « tirs au but » no nivoaka ho mpandresy tamin’ny isa 4 noho 3 i Angleterre. Hihaona amin’ny ampahefa-dalana, holalaovina amin’ny sabotsy 7 jolay, i Angleterre sy Suède. Ity farany izay nandrava ny nofinofin’i Suisse, resy tamin’ny 1 noho 0. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 03 juillet 2018 15:49
Kitra-Mondial 2018: Hifandona i Brésil sy Belgique
Hifanandrina amin’ny lalao ampahefadalana amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra i Brésil sy Belgique. Nanilika an’i Mexique tamin’ny isa 2 noho 0 i Brésil tamin’ny lalao ampahavalondalana, ary 3 noho 2 kosa no nandresen’i Belgique an’i Japon. (Jereo sary Tohiny)
mardi, 03 juillet 2018 11:40
Kitra-Mondial 2018: Nihosona niaraka tamin’ny mpanohana ny ekipany ny filohan’i Croatie
Nandray zotra-mpiaramanidina tsotra niaraka tamin’ireo teratany kroaty, niala tao Croatie niazo an’i Russie hanohana ny ekipam-pirenen’i Croatie, ny filoha Kolinda Grabar-Kitarović nandritra ny lalao ampahavalon-dalana nandresen’i Croatie an’i Danemark tamin’ny « tirs au but » 3 noho 2, rehefa nirava sahala 1 noho 1 ny ekipa roa tonta, ny alahady 1 jolay 2018. Nihosona niaraka tamin’ny mpanohana teny amin’ny « gradin » ramatoa filoha nandritra ny lalao, fa tsy namonjy ny toerana voatokana ho an’ireo manampahefana.
lundi, 02 juillet 2018 19:25
Kitra-Mondial 2018: « Tirs au but » vao tafavoaka i Russie sy Croatie
Hihaona amin’ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra i Russie sy Croatie rehefa avy nanilika tamin’ny « tirs au but » 4 noho 3 an’i Espagne ho an’itsy voalohany, ary 3 noho 2 an’i Danemark ho an’ny faharoa rehefa samy nirava sahala 1 noho 1 taorian’ny 120 minitra ny lalao roa notontosaina omaly.
samedi, 30 juin 2018 10:18
Kitra-Mondial 2018: Mody avy hatrany izay resy manomboka eto
Hanomboka anio ny ampahavalon-dalana amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra, lalao izay tanterahina any Rosia ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018. Raha ny fandaharan-dalao anio dia hifandona amin’ny lalao voalohany amin’ny 5ora hariva, ora eto Madagasikara i France sy Argentine. Amin’ny 9ora alina kosa ny lalao hifanandrinan’i Uruguay sy Portugal. Tsy maintsy misy mpandresy vao vita ny lalao, manohy mankany amin’ny ampahefadalana izay tafavoaka ary mangoron’entana avy hatrany kosa izay ekipa resy.